गर्दन स्ट्रेच - आधारभूत व्यायाम तपाइँ जान्नु पर्छ | बेजिया
सुसाना Godoy | 14/09/2021 16:00 | व्यायाम
आज आफैंमा एक प्रशिक्षण भन्दा बढी, हामी टाढा को श्रृंखला बाट टाढा जाँदैछौं घाँटी व्यायाम वा स्ट्रेच। किनकि जसरी हामी राम्रोसँग जान्दछौं, यो सबैभन्दा जटिल क्षेत्रहरु मध्ये एक हो, जुन धेरै पीडित हुन सक्छ। घाँटी दुखाइ वा यस कारण को लागी चक्कर आउनु हाम्रो जीवन मा दिन को क्रम हो।
तेसैले, यदि यो हाम्रो हातमा छ रोक्न वा उनीहरुलाई सुधार गर्न को लागी, केहि राम्रो छैन। तेसैले, हामी ध्यानमा राख्नु पर्छ कि त्यहाँ छन् अभ्यास को एक श्रृंखला जसको साथ हामी अधिक गर्दन आराम गर्न सक्षम हुनेछौं। केही गर्भाशय ग्रीवा समस्या contractures संग सम्बन्धित छन्। के हामी सुरु गरौं?
1 पार्श्व घाँटी फैलिएको छ
2 चिकनी टाउको घुमाउँछ
3 घाँटी फैलाउँछ र ठुलो सs्कलन गर्दछ
4 मेरुदण्ड पनि तान्न आवश्यक छ
पार्श्व घाँटी फैलिएको छ
यो अभ्यास सबैभन्दा राम्रो ज्ञात मध्ये एक हो र यसको अतिरिक्त, हामी यो पनि विभिन्न रूपहरु मा पाउन सक्छौं। तिनीहरु मध्ये एउटा यो हो कि हामी यो बस्न सक्छौं, हतियार तल र काँधहरु छोडेर पनि। यदि हामी दुबै ठाउँमा थोरै बल गर्छौं, राम्रो। त्यो पल मा तपाइँ तपाइँको गर्दन एक छेउमा झुकाउनु पर्छ, जस्तै कि तपाइँको कान कंधे लाई छुनु चाहानुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ आफैंलाई कहिल्यै बल दिनुहुन्न र तपाइँ बिस्तारै व्यायाम गर्नुहुन्छ। तपाइँ यसलाई दायाँ तिर र त्यसपछि बायाँ वा यसको विपरित गर्न सक्नुहुन्छ।
अवश्य घाँटी को लागी यी स्ट्रेच को एक अन्य प्रकार यो हात को मद्दत संग गर्न को लागी हो। हतियार तल छोड्नुको सट्टा, हामी टाउको हाम्रो हातले समात्छौं जहाँ हामी खिच्न चाहन्छौं। त्यसोभए हामी यो जस्तै केहि सेकेन्ड अन्य पक्षमा परिवर्तन गर्न रहनेछौं। या त तपाइँको हात संग धेरै धेरै दबाव को उपयोग नगर्नुहोस्, यो मात्र उपयोगी छ।
चिकनी टाउको घुमाउँछ
हामी पनी व्यायाम को वैकल्पिक वा यो एक संग माथी घाँटी को लागी खिच्न सक्छौं। यो सरल छ किनकि तपाइँसँग यो गर्न को लागी दुबै बस्ने र उभिएर गर्न को लागी विकल्प छ। दुबै अवस्थामा शुरुवात स्थिति उस्तै छ किनकि हामी हाम्रो हतियार तल र हाम्रो काँधहरु संगै हुनु पर्छ। एक पटक तयार, यो तपाइँको टाउको हल्लाउने समय हो। त्यो हो, हामी एक छेउमा मोड्नेछौं र त्यसपछि अर्को। यो सबै बिस्तारै अवांछित चक्कर आउन बाट बच्न। यो trapezius क्षेत्र को मांसपेशिहरु लाई सक्रिय गर्न को लागी एक सही तरीका हो।
घाँटी फैलाउँछ र ठुलो सs्कलन गर्दछ
यो कसरी कम हुन सक्छ, हामी प्रदर्शन गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो अभ्यास को एक अर्को सामना गरीरहेछ। यो शरीर सीधा राख्न को बारे मा छ, त्यो हो, छाती को भाग सार्न सक्दैन। त्यहाँ बाट, के सार्नेछ घाँटी र ठोडी। किनभने हामी एक अगाडी गर्दन आन्दोलन गर्नेछौं। हामी कल्पना गर्छौं कि हामी एक रबर घाँटी छ र हामी यो टाढा सम्म सकेसम्म अगाडी बढाउन चाहन्छौं, तर तल छैन। शरीर को बाकी सार्न सावधान रहनुहोस्। जब हामी यसलाई तान्छौं, यो त्यो गर्दन स collect्कलन गर्न को लागी समय हो र हामी यो ठोक्न को लागी यसलाई पूरै टाँस्न को लागी पछाडि गर्न को लागी गर्नेछौं।
मेरुदण्ड पनि तान्न आवश्यक छ
यद्यपि हामी घाँटी को भाग मा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं, यो सत्य हो कि रीढ़ को हड्डी पनि एकजुट छ र हामीलाई यो खाता मा लिन को लागी आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै अभ्यासहरु छन् कि हामी उनको लागी गर्न सक्छौं, तर यस मामला मा हामी के प्रयास गर्न जाँदैछौं कि आंदोलनहरु एकजुट छन् र हाम्रो गर्दनको लागी डिजाइन गरीएको छ। त्यसोभए, तपाइँ पूर्णतया सीधा हुनु पर्छ। अन्य शब्दहरुमा, एक धागा को लागी तपाइँको टाउको माथी तपाइँको लागी तान्दै थियो। यस अवस्थामा हामीलाई चाहिन्छ पछाडि र गर्दन तान्नुहोस् तर सबै बाध्यकारी बिना, यद्यपि जति धेरै हामी राम्रो गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी आराम र सुरूवात स्थिति मा फर्कनुहोस्। गर्दन सीधा जान्छ र यसको लागी, ठुलो एक सानो तल जान्छ जस्तै यदि तपाइँ डबल चिन चिन्ह लगाउन चाहानुहुन्छ। तपाइले बुझ्नुभयाे? त्यसपछि धेरै दोहोर्याउनुहोस् र तपाइँ परिवर्तन देख्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » व्यायाम » व्यायाम र घाँटी को लागी फैलिएको छ